Kuongorora kwakadzama kweScdrol (Methasterone) yekuvaka muviri
Zvose pamusoro Superdrol (Methasterone)
1. Chii chinonzi Superdrol (Methasterone)? 2. Superdrol dosage
3. Superdrol cycle 4. Superdrol results
5. Superdrol halflife 6. Superdrol yekucheka
7. Superdrol for bulking 8. Superdrol inobatsira
9. Superdrol review 10. Superdrol inotengeswa
11. Superdrol yekuvaka muviri (muchidimbu)
1. Chii chinonzi Superdrol (Methasterone)? Chinoshanda sei?
Iwe unogona kunge wakanzwa nezvazvo Superdrol (Methasterone) kubva kune vatambi, vashandi vehupfeko kana ani zvake anoda kuve nechitarisiko chinonakidza. Kana iwe wakashamisika kuti Superdrol (3381-88-2) nderei, verenga nyaya ino kune zvigunwe uye iwe uchanzwisisa mhepo ye Superdrol, Superdrol dosage, Superdrol inobatsira uye zvose zvinosanganisira iyi steroid yemashiripiti.
Zvakanaka, Superdrol (3381-88-2) inonyanya kuzivikanwa seSydrol kana methyl drostanolone imwe yeiyo yakanyanyisa inobata vanabolic androgenic steroid (AAS) iyo mizimba inogona kupika. Yakagadzirwa muC1950 asi haina kubudiswa mumusika semishonga yemishonga.
Kunyange zvazvo Methasteron pachayo yakaramba iine steroid pasi pevhu, asi kwete 17a-alkylated mumwe weMethasteron ave ari mumusika pasi pezita rokuti Masteron. Pane imwe nguva kare, pakanga paine zvokudya zvekudya zvinonzi branded Superdrol nokuti yakanga ine Methasteron.
MuC2006 yakabviswa neDFA uye mu2012. Methasteron yakanga yakarambidzwa zvachose saka ichiiwedzera mumhando yezvinhu zvinodzorwa semamwe ose Anabolic Androgenic steroids.
Izvo hazvina kuita kuti Methasteron irege kupera kubva munzvimbo yekuvaka muviri. Iyo nguva dzose yakatora nzvimbo yakakwirira semumwe wemhando dzakanyanya steroid oral.
Superdrol (3381-88-2) inoshanda nenzira imwechete iyo dzimwe vanabolic androgenic steroid do. Kusiyana kwakasiyana ndekwokuti kuumbwa kwacho kwakasiyana uye kunopa nokukurumidza uye zvinoshamisa zvibereko.
Inosanganisira steroidal hormone inozivikanwa inozivikanwa semethyldrostanolone. Iyo dihydrotestosterone (DHT) iyo inoshandiswa ye drostanolone. Musiyano pakati pe drostanolone uye Superdrol ndeyekuti drostanolone ine imwe mhedhyl yakawanda yakaiswa pachinomwe chegumi cheCarbon. Iri boka ndiro rinoita kuti zviitike kuti Superdrol inotorwa nemuromo uye inogonawo kudarika chiropa chako.
Superdrol ine imwe methyl yeboka yakawanikwa paCarbon yechipiri nzvimbo uye inoita kuti ive anabolic steroid. Izvozvo zvishoma kubva ku drostanolone zvinokonzera zvishoma uyerogenic zvinokonzerwa muSoldrol zvichienzaniswa nedzimwe vana anabolic steroids. Icho Chinyorwa Chekupedzisira kuna Dianabol yekugadzirisa muviri
Superdrol inoshanda nekusimudzira nitrogen kuchengetedza uye protein synthesis. Iyo inobatsira nayo ndeyokuti apo mamwe mapuroteni anogadzirwa, uye nitrogen inoramba yakanyanya misi miviri yakagadzirwa. Inokurumidza kukura kwekugadzirisa nekuchengetedza, inokurumidza iwe unoenda kuwanda.
Kushandisa Superdrol kunotungamirirawo kune oxygenation yemisumbu yemaviri. Paunenge uchidzidzira, ma microfibers ako anobvaruka, uye kukura kwemisumbu kunouya nekuda kwekugadzirisa. Mhepo yakakosha inoreva kuti vanodzoka nokukurumidza uye naizvozvo, munokwanisa kudzidzisa zvakanyanya izvi zvichiwedzera kukura kwematumbo enyu.
2. Superdrol dosage
Apo patinotaura pamusoro Superdrol dosage, tinofanira kuchengeta mupfungwa kuti zvinangwa zvemuviri zvinopesana nomunhu nemunhu. Apo mumwe angada kuwedzera, chimwe chinangwa chinogona kunge chiri kucheka. Zvose mune zvose zvinowanzoitwa Superdrol dhijeni ye20-30mg kwemavhiki anenge mana kusvika matanhatu yakakwana kuti ikupe zvinangwa zvisingatauri utano hwako huri pangozi.
Most Superdrol vashandisi vanoti kusati wasarudza Superdrol dosage, unofanirwa kuchengetedza kuenzana kwakanaka pakati pemakumbo emasumbu nemigumisiro. Unogona kuenda kusvika ku40mg kana uchida. Neichi chiyero, iwe uchawana humwe hutsika uye hunobudirira simba usingakanganwi Superdrol nemigumisiro zvakare. Hazvina kukodzera.
Kana ukasarudza kutora 40mg, haufaniri kuishandisa kwevhiki dzinopfuura mana. Mushure menguva iyi, chiropa chako chichava chakanyanyisa zvokuti kana iwe usingatori nguva, unogona kuguma uchitambura nehupukisi. Mushure memavhiki mana, chiropa chako chichatora kuti chiwanezve kuitira kuti chikwanise kushanda zvakanaka.
Kana iwe uri kukwira Superdrol chete, iwe unogona kuparadzanisa dhiyo mudiki uye uvatore zuva rese. Somuenzaniso, iwe unogona kuva nechimwe mangwanani, mumwe asati ashanda kunze uye muwedzere wokupedzisira unogona kugoverwa manheru. Nokuita izvi, unosvika pakuona zviduku zvishoma nokuti kutora Superdrol kunogona kukonzera kuchinja kwemahomoni ako.
3. Superdrol cycle
Kazhinji, chirwere che Superdrol chinotora mavhiki matanhatu kusvika masere. Sevatanga, unogona kutanga ne Superdrol dheji ye 10mg pazuva kuti uedze kunzwisisika. Kana wangoona kuti muviri wako unopindira sei, unogona kuwedzerwa dheji zvishoma nezvishoma. A Superdrol dhigiri ye 20mg inogona kunge iri iwe unotevera iwe kutora. Kana uchinge wakanzwa sewe une chiitiko chakakwana, unogona kutanga kutora 30mg pazuva.
Kune avo vanosarudza kuvhara Superdrol (3381-88-2) pamwe nezvimwe uyerogenic anabolic steroid zvakadai seTesttosterone, panguva yekutanga kushanda ndiyo nguva yakakodzera. 10mg yakakwana kukupa huwandu hwe Superdrol dzinobatsira.
Mushure mokunge muteerera Superdrol, iwe unofanirwa kuenderera mberi nehutano hwemashure. Iwe unogona kuita PCT kubva muchishanu kusvika kumavhiki masere. Inobatsira pakuwanazve hutano hwechirongwa chako uye nekusimudzira mahomoni ako. Uyewo, unogona kudzivisa kusagadzikana migumisiro inogona kuitika nekuda kwekusaenzana kwamahomoni.
4. Superdrol results
Superdrol (3381-88-2) yakunda pamwoyo yevakawanda nekuda kwemigumisiro inopa. Kana iwe uchitanga Superdrol mhepo kwemavhiki anenge mana kusvika matanhatu, iwe unogona kunge uine mamiriyoni gumi emisero yemisumbu. Unosanganiswa nedzimwe maAAS, iwe uchaona zvakanakisisa zvigumisiro.
3-vhiki yevhiki inotora 20mg Superdrol 1 / 3 / 2019 27 / 3 / 2019
uremu 95.3 makirogiramu 100kg
Waist 104 masendimita 104.5 masendimita
Ng'ombe (R) 38cm 40cm
Chidya (R) 65 masendimita 67 masendimita
bhokisi 115cm 116cm
pamafudzi 133 masendimita 135 masendimita
Upper Arm (R) 43 masendimita 46 masendimita
Sezviri pachena patafura, zvigumisiro zvinotyisa mushure mokushanda Superdrol mumakore matatu chete. Nhamba yakadzika ye20mg yakashandiswa. Kubva pane data iripo, unoziva kuti Superdrol bulking Kubudirira kuri nani kune vakawanda.
Pamusoro pezvo, inowedzera simba zvinoshamisa. Kuva akakwanisa kusimudza 50lbs zvakawanda pamusoro pehuremu hwave uchidzidzira nechocho hachisi chimwe chinhu chatinogona kukanganwa. Apo vanhu vachitaura nezve Superdrol dzinobatsira, haungasviki kunzwa pamusoro pesimba uye kuwanda kwekukura. Mukubatana nekudzidziswa uye kudya kwakakodzera, hauzombofi wakaoma kuti uwane zvinangwa zvemuviri wako.
Iyo Superdrol hafu-hupenyu inosvika maawa masere kusvika mapfumbamwe. Nemhaka yeiyo, inobva kune imwe yenheyo nekukurumidza uye ichi ndicho chikonzero nei ichida nguva dzose. Nokuita izvi, unogona kuchengetedza hutano hwakasimba mumutumbi.
6. Superdrol yekucheka
Superdrol inobatsira mukunyungusa mafuta kure kuti ipe muviri wakaoma uye wakaoma. Kana imwe nguva mishonga yako yose yakavakwa, iwe unoda kutema nokuti unogona kuva namafuta mazhinji pasi peganda. Nenzira yakanaka, Superdrol ichakubatsira iwe sezvo ichi inoderedza pasi pamafuta uchichengetedza musumbu.
7. Superdrol for bulking
Kune avo vanoda kutarisa vakavhara, Superdrol inosarudzo yakanakisisa. Kupfurikidza nekusimudzirwa kwe nitrogen kuchengetedza uye protein synthesis, inopa zvibereko zvakanaka. Pamwe pamwe nekudya kwakanaka uye chirongwa chakakwana chekuita basa, ichakubatsira iwe kuwedzera pamatumbo ako.
8. Superdrol inobatsira
Kuva mutumbi wekuvaka muviri kunoda zvinopfuura kungodya zvakanyanya uye kudzidzira. Zvinosuruvarisa, izvi zvingasakuvimbisa iwe nemigumisiro yaungangotarisa. Kushandisa Superdrol kunoita! Superdrol dzinobatsira zvikuru uye dzinooneka uye hazvishamisi kuti inonzi dangwe reAnadrol.
Heano mamwe acho Superdrol inobatsira;
Kurasikirwa kwemafuta ndiko kutsva kwepanyika munyika yekuvaka muviri. Kune zvakawanda zvakagadzirwa mumusika unoti unobatsira neizvi uye vamwe vachiri kupindira mukati. Dambudziko nderokuti havasi vose vanobudirira uye havagoni kukubatsira iwe kuzadzisa chinangwa chako. Zvimwe zvinogona kukuita kuti uremerwe uremu zvakanyanya zvokuti iwe unosara neganda rinoputika kana musana.
Pfungwa yako yekupedzisira inofanira kunge iri kurasikirwa nemafuta nekuderedza mafuta akawanda mumuviri usina kurasikirwa nemisungo yako. Kana iwe ukarasikirwa nemisungo yako, iwe unova usina kusununguka, uye zvese zvako zvinopera.
Kana iwe wakafunga nezvekudurura mamwe mapaundi, Superdrol inofanira kunge yakasvika mupfungwa dzako kutanga. Pasinei nokuti wakaedza kudya, kudzidzisa kana kuti zvose zviri zviviri, ungangodaro wakaona kuti unoda chimwe chinhu chinowedzera. Nenzira yakanaka, Superdrol inobatsira iwe kuderedza uremu zvakanaka. Icho chimwe chezvinhu zvinogona kuvimbwa. Nandrolone Phenylpropionate (NPP) Purogiramu, Zvigumisiro, Zvipo, Nhamba
Kubudirira nayo ndeyokuti inopa migumisiro yemashiripiti nekukubatsira kuti uderedze uremu hwako kune unhu hwakanaka. Sezvo ine simba rekuchengetedza mishonga yako, iwe uchagara uine muviri unofadza sezvo Superdrol rubatsiro mukupisa mafuta asina chakanaka uye hapana chimwe chinhu.
Hapana kuchengetwa kwemvura
Vose vanogadzira muviri, vaduku kana vakuru, vanotongwa nemusana wavo kuenzanisa, tsanangudzo, nekukura. Apo mumwe ane musimba hwakanyanya tsanangudzo, mafuta awo mazinga akadzika kwazvo. Zvisinei, dzimwe nguva tsanangudzo yemasumbu inogona kuderedzwa nekuda kwekuchengetedza mvura.
Zvimwe steroid ichakubatsira iwe pakuwana mishonga mizhinji iyo inokonzerwa nekugadzirisa kuchengetedza mvura. Kutendeseka, haungadi kutarisa hutu hwose nekuda kwekuwandisa kwemvura. Iwe wakaramba uchifunga nezvekudya kwako, kurovedza uye mukutora steroid yako uye ipapo kuwedzera kwemvura kunowedzera zviri pasi pematambudziko ako akaoma. Iyo inodhaka yakawanda haifaniri kunge ichiita chikonzero nei misumbu yako ichiita seyakasvibiswa.
Kuwana kwakadaro kuchanyangarika kamwe pakarepo kana waita neyero yako. Inongova yenguva pfupi uye inogona kuenda kukusiya iwe sezvawaive usati watanga steroid.
Chimwe chinhu chinoshamisa che Superdrol ndechokuti hachikonzeri mvura yekuchengetedza. Icho ndicho chikonzero nei musuru hunoita seine firmer, uye musculature inonakidza. Iyi steroid inofanirwa kutenga sezvo ichikwanisa kukupa tsanangudzo yakakwana iyo ichakuwana iwe nzvimbo yekutanga kana iwe uri kuenda kumakwikwi chero ipi zvayo.
Kubva ikozvino iwe wakangonzwa nezvedzimwe nzira iwe unogona kuvaka misumbu yako. Kana iwe uchiramba uchitsvaga nzira yekuwana nayo miviri yakawanda, iwe ucharamba uchitsvaga zvakawanda, uye iwe paunoona kuti kune mazano akawanda akasiyana. Vamwe vavo vachakusiya uchinetseka, uchivhiringidzika uye uchinetseka. Zvakanaka, ndine mashoko akanaka kwauri:
The Superdrol bulking effect inonyatsobudirira iyo kana iwe ukasarudza kutenga Superdrol powder, iwe pamwe hauzotariri shure. Ndinogona kutaura nechivimbo kuti kana iwe uchitaura kuti uri muvhareji kana usina musumbu, steroid iyi ichakubatsira iwe kuvaka muviri wakasimba wamuri kutarisira.
Sezvambotaurwa kare Superdrol bulking effect inokonzerwa neprotein yeprotein synthesis uye nitrogen retention. Zvose izvi zvinowedzera mumakwikwi, uye ndicho chikonzero Superdrol bodybuilding zvikomborero zvichakuitira iwe zita rekunyora muviri uye panzvimbo yako yebasa. Uine izvi mupfungwa, haungarambi uchishamisika kuti nei masimba ako ari kuwedzerwa kune rimwe zuva.
Hapana esrogenic madhara
Imwe yemigumisiro yakakomba iyo steroid inokonzera ndiyo isrogenic migumisiro. Muchidimbu, izvi zvinoreva kuti pane kuchinja kune hutano hwekuita zvepabonde nekuberekwa kweimwe. Hapana munhu anoda kutambura kubva kune gynecomastia kana murume boobs paanenge achiedza kuita misi mikuru. Zvinogona kukuita iwe kunyara uye sengoko zvakare. Iyi steroid inonyatso kukoshesa nokuti Superdrol nemigumisiro haifaniri kusanganisira chero yesrogenic migumisiro.
Sezvo steroid anabolic, hazvizodi kuti iwe utore chero anti-estrogen pamwe chete kana iwe uchisarudza kuendesa Superdrol cycle. Kusiyana nedzimwe steroid iyo inogona kukusiya nekutyisa kweesrogenic, Superdrol ichasiya yako androgen mazinga akadzika kwazvo.
Kuwedzera mune simba uye kudzivirira
Hapana imwe steroid inokwanisa kukupa nehuwandu hwakawanda hwakafanana neyeMethasteron. Inobvisa kuratidzwa maererano nekusimudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa. Nekudaro, unowedzera simba rinoshandisa simba pamwe chete nehutachiona hwakanaka.
Kuenda ne Superdrol kuongorora, vanhu vazhinji vanoti vanonzwa vakasimbiswa mushure mekushandisa Superdrol. Kudzorera uye kutsungirira zvinokurudzirwa kubva pano zvichikubvumira kuti udzidzise zvakaoma kushanda nesimba. Kutora kodzero yako Superdrol dosage ichakubatsira kuti urege kuneta, uye iwe unogona kugara uchidzidzisa zvakaoma chero nguva iwe unonzwa uchida. Hazvina kunaka here?
Wedzera pane simba
Nguva dzose ini ndinonzwa vashandi vemuviri vachitaura nezvekuzadzisa hukuru uye kwete simbawo, ndinopesana. Simba chinhu chinokosha pakuvaka muviri. Pasina kuwana, iwe unogona kusakwanisa kukwidza zviyero zvaunofanirwa kuita. Iwe unoona zvandiri kureva ndezvokuti kana iwe uchida kukura kukunda iwe unofanirwa kusimba kusimba uye hapana imwe nzira yakapoteredza.
Vanhu vazhinji vanoda kuva nemisimba yakanaka uye vakakanganwa kuti simba ndiro rinokubatsira kuita. Kana iwe uchida kutarisa simba uye kuita saiyo, Superdrol ndiyo steroid kwauri. Ichakubatsira mishonga yako kukura yakasimba uye yakakura panguva imwe chete.
Kugadzirisa kunonoka urombo
Kazhinji, vamwe vanhu havazoperi munguva yakakodzera. Somuenzaniso, vamwe vanogona kuva nazvo mumakore makumi maviri apo nguva yakakodzera inofanira kuva yepamativi gumi nematatu. Zvinhu zvizhinji zvinogona kutungamirira kune izvi zvinosanganisira nyaya dzezvakatipoteredza pakati pevamwe.
Sezvo steroid inowanzofananidzira kushanda kweTesttosterone, kutora Superdrol kunogona kubatsira mukugadzirisa nyaya dzekuyaruka. Somugumisiro, munhu anogona kuve akakwana, uye muviri wavo uye zvekuita zvepabonde zvinogona kuwedzera zvakanaka.
Kuva chirwere cheropa chinoratidzirwa nechepasi tsvuku tsvuku yesero kuverenga, Anemia inoporesa nekushandiswa kwe Superdrol. Izvozvo ndezvekuti Superdrol inowedzera iyo tsvuku yeropa remuviri mumuviri. Hazvishamisi mishonga yeAnemia inonzi ine steroid. Cherechedza kuti kurapa kweAnemia, Superdrol inofanira kutorwa nguva dzose.
Apo utete hweTesttosterone huri pasi mumuviri, Superdrol inogona kushandiswa kugadzirisa kusaenzana. Testosterone vs. estrogen kusawirirana kunogona kukonzera matambudziko mumuviri wako kusanganisira kuwedzera kwemafuta omuviri pakati pevamwe. Kuburikidza nehutungamiri hweMethasteron, migumisiro inogona kuchinjwa sezvo steroid iyi inofanidza nzira yeTesttosterone.
9. Superdrol review
Ai anoti, "Steroid iyi inoratidzika seyakanakisisa kwandakawana kusvika ikozvino. Ndakashandisa steroid inoverengeka kwemakumi emakore, uye ikozvino, izvi ndizvo zvakandiitira. Pashure pekunge vamwe vakundikana kundipa migumisiro yakanaka, ndakafunga kuti pangave pane chimwe chinhu chiri nani kunze uko. Izvo zvazviri, Superdrol yakaisvonaka kana iwe uchida kuwedzera kuwanda kwemisasa. Ndinofanira kunge ndichitenda buyaas.com nokuda kwekutengesa iyo kwandiri.
Ndave ndichiri kutora kwemavhiki masere apfuura ndisati ndaita shanduko yakawanda muitiro rangu rekuita. Mishonga yangu ikozvino yakakura uye inotsanangurwa; chimwe chinhu chandaifunga chaisazomboitika kwandiri. Yakabudisa kunze kwangu kuti ini ndiri kunyadziswa nekudzidziswa nebhokisi rangu rose. Kana uri kutora imwe steroid imwe kunze kweSuidrol, saka iwe uri kuita zvose zvisiri izvo. "
Bai anoti, "Superdrol ndivo amai vekudzoka. Munguva yakapfuura, ndakanga ndichinetseka asi ndisisipo. Ndave ndichiri kushandisa kwemavhiki matatu, uye ini zvino ndinonzwa ndakagadziriswa zuva rese kubasa rangu (ndinoshanda munzvimbo yekuvaka). Zvimwe kunze kweizvozvo, ndinotamba nevanakomana vangu manheru manheru ndisati ndapedza basa rangu.Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar (Oxandrolone) yeMuvhuro
Ndave ndichiverenga nezve steroid yakasiyana-siyana kusvikira ndagara pa Superdrol kubva ku buyaas uye zvose zvandinogona kutaura ndezvokuti ndinoonga kuti ndakazopedzisira ndawana chigadzirwa chakanakisisa. Oo! Basa revatengi riri pamusoro uye kupfuura. Kukurukurirana kwavo kwakakwirira, uye ini ndakagamuchira mapurisa angu mukati mekanguva. Handigoni kutaura zvakakwana pamusoro pewebsite ino uye chigadzirwa ichi. Ndiyo hongu kubva kwandiri. "
Bohai anoti, "Ndakanga ndashanda kwemakore anodarika gumi uye ndakaedza chero chii chinopinda mupfungwa dzako. Mushure mokunge ndakatungira kuputika, ndakagara ndichirwisana nekucheka uye kazhinji, ndakasara nehukuru hwakakura pasina misi inowanikwa. Ndakanga ndisingatauriki kana ndakatenga izvi asi ndaive netariro yakawanda kubva kune Superdrol review Ndakanga ndamboverenga paIndaneti.
Simba rangu uye kutsungirira zvanga zvichikwira kubva pandakatanga kushandisa steroid. Kwemavhiki mashoma andakashandisa, ndakaona kuti ndave ndava kunyanya kuonda uye ndezvezve vascular. Kunyange ini ndakaramba ndichirema zvandaiva nazvo pazuva rimwe, muviri wangu mafuta wakaderedzwa ne3.4%. Ndinotarisa uye ndinonzwa sechinhu chitsva uye ndichizvitarisa mugirazi; Ini ndasara ndisinganetseki nei ndakanga ndisati ndatanga iko pakutanga. Ndaizodavira kune ani zvake anoda kuvhara nekuchengetedza misungo yavo. "
Ying anoti, "Ndakatenga Superdrol kubva pamusangano wekufananidzira shamwari yangu. Ndakagara ndichida kupinda mumuenzaniso, asi ndakanga ndisinganyatsogutsikana nezvehupenyu hwangu. Kugara shure kwedeski rangu kwemakore mashanu ekupedzisira yakawedzera mamwe mafuta mumuviri wangu waimbova wekufananidzira.
Pakupedzisira kwangu pakupedzisira kwegore rapera, ndaiva 223. Mazuva makumi mana gare gare mushure mokudya vakachena uye vachimhanya ne Superdrol cycle, ini ndiri pasi ku199lbs. Itero steroid inokanganisa mararamiro ose kusanganisira iyo ekukonzera migumisiro yakaipa. Handina kumbocherechedza chero Superdrol nemigumisiro kusvika ikozvino, uye ndizvo zvinoita kuti ndinde chigadzirwa ichi kunyanya. Muviri wangu wadzoka, uye ndangobva kumira uye ndakatanga kuita izvo zvandakagara ndichida izvo zvinoshandiswa pakufananidzira. Superdrol kudzvora zvikomborero zvakandibatsira kuti ndiise kuguma kwekuva nemuviri unongova mhepo. Ndinokutendai Superdrol! "
10. Superdrol inotengeswa
Kunouya nguva iyo munhu wese anogadzira muviri anonzwa seanoda chimwe chinhu chinowedzera. Kushandisa steroids inzira yakarurama yekukurudzira musimba kukura uye kurasikirwa nemapirundi akawanda kana iyo ndiyo chinangwa chako. Vashandi vehutachiona havasi ivo voga vanofanira kushandisa steroids, asi chero maitiro evanhu vanogara vachiita zvekuita gym vanonzwa sokuti vanoda kupupurira miviri yavo inogona kuenda.
Superdrol ndeimwe yevanhu vanozivikanwa steroid iyo inokupai bang buck yako. Iro chirwere chinodzora, uye iwe ungasakwanise Tenga Superdrol powder chero kupi zvako. Muzviitiko zvakawanda, unogona kubviswa, uye iwe unogona kuguma nekukwanisa zvakakwana zvakagadzirwa. Kuisa maoko ako pane chivimbisi cheSpodrol zvinogona kunge zvakaoma, uye kana iwe usingachenjeri zvakakwana, zvinogona kungova kuparadza mari.
Indaneti ndiyo nzvimbo yakanakisisa iyo iwe unogona kutenga Superdrol online pasina kuenderera mberi nenzira yose yekutenga. Iwe chete unoda kuwanika paIndaneti uye uone anonyanya kukoshesa mupiki wepa Superdrol uyo achakupa iwe michina yemhando. Ichakudzivirira kutenga chigadzirwa chisingashandi kana chimwe chinokuvadza utano hwako.
Imwe yenzira dzakakwirira dzekuwana mupi wezvakanaka ndeyokuwana munhu ane mazano akanaka kwazvo. Kusarudza mumwe uyo ane mazano akanaka achakubatsira kugadzirisa dambudziko rekutsvaga mupiriri we Superdrol. Zvinoreva kuti iwe zvino unogona kuumba pfungwa yako zvichienderana nezvimwewo vamwe vanhu vakambonzwa ne Superdrol mutengesi.
Uyezve, iwe unobvumirwa kuenzanisa nhamba pakati pevatengesi vakasiyana-siyana mukunyaradzwa kweimba yako. Ndiani asingadi kuponesa mamwe mabhiriyoni emadhora? Asi iwe unofanirwa kuchengetedza kutarisa kwezvinhu zvakaderera zvakagadzirirwa sevatorwa nevashambadzi vasina chokwadi. Enda kune uyo anopa chiyero chakanaka chakakosha chibereko, uye icho hachikusiyi iwe kuputsa.
Isu tiri vakanakisisa vaSupprol vatengesi avo zvigadzirwa zvinokupai hutano hwepamusoro. Zvose zviri mu Superdrol yedu kutengesa zvakachengeteka uye sezvakanyorwa pane tsanangudzo yemagetsi. Paunotanga kuitora, hauzombofi wakaoma kuti uite zvinangwa zvemuviri wako.
Nhare yedu yeWorldrol inonzwisisika, uye inokwanisika kune wese wese kusanganisira iyo iri mune bhajeti - kuronga ku Shandisa Superdrol in bulk? Tine zvikwereti zvakanakisisa kwauri. Kutaura kwedu kune chokwadi, uye iwe unogona kutarisira purogiramu yako mukati mechinguva chiduku. Tenga nhasi uye uwane chaiwo Superdrol.
Sezvakaratidzwa munyaya ino, kushandiswa kweSupprol kunogona kukubatsira kuti uwane chikamu chemuumbi wehupi. Chero ani zvake ave ari mu Superdrol bodybuilding anogona nyore kutaura zvinetso zvinouya nazvo. Mune dzimwe nguva iwe unonzwa sokuti iwe unorega nokuti unofunga kuti haungakwanise kusvika pakakwirira pasina kushandiswa kwekuvandudza zvinodhaka. Nenzira, Superdrol zvinogona kukurumidza kuita izvi zvichikupa migumisiro inofadza.
Nekushandisa kwayo muviri wako wekuvaka muviri hauchazoperi; mumavhiki matanhatu anotevera, uchakwanisa kuwana mhinduro dzinooneka. Kana ukashandiswa pamwe chete nekudya kwakanaka uye kudzidzisa kwakasimba, zvinokupa maitiro akanaka.
Kunyanya, yakaratidza kuva yakakosha mukurapa kwehumwe hutano hunojairika nhasi. Zvisinei, kuti urege kukuvadza muviri wako kupfuura iwe unogona kuibatsira, iwe unofanirwa kutora chirongwa che Superdrol dosage. Zvakawanda zvaro zvingasaiti nguva dzose kukupa mhinduro dzakanaka.
Paunenge uchishandisa Superdrol, zvinokosha kuti iwe uone nezvekudya kwako kuti uone kuti iwe unowana zvakanyanya. Kudya mijenya yezvokudya zvepamusoro-protein zvinogona kubatsira kukurumidza kuwedzera Superdrol bulking effect. Uyezve, kuderedza nhamba ye carbs uye isina kudya mafuta akawanda iwe waunotora ichaisa iyo Superdrol cutting zvabuda.
Kushanda kunze kwezvo ndiko kuchaita kuti Superdrol zvionekwe zvakare. Zvinosuruvarisa kuti vamwe vanogadzira muviri vanofunga kuti kutora Superdrol uye kwete kudzidziswa kuchaita kuti basa riitike. Chero steroid iyi inobatsira mukusimudzirwa kwekukura kwemasimba, hazvirevi kuti iwe unofanirwa kuwana slacker mune zvekurovedza. Ichokwadi ndechokuti iwe unofanirwa kutoshanda kaviri zvakanyanya nokuti iwe wakasimba uye zvino unogona kudzoka nokukurumidza.
Tenga iyo nhasi uye tevera pfuma yawakagara uchirota.
The Sports Supplement Bhaibheri: Neutano Nehutano, Ne Will Brink, Peji 302-307
Nutritional Supplements muMutambo uye Kuita Kudzidzira, rakagadziridzwa naMike Greenwood, Matthew B. Cooke, Tim Ziegenfuss, Douglas S. Klman, Jose Antonio, peji 13
Anabolic-Androgenic Steroids, yakagadziriswa naCharles D. Kochakian, peji 374